स्नातक तहको परीक्षाफल यसै साताभित्र – Paluwa Khabar
जेठ २९, २०७८ शनिबार 146
बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा पाल टाँगेर भए पनि प्राध्यापकलाई काम पूरा गरिदिन आग्रह गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू डराएकाले परीक्षण कार्य केही दिन बिलम्ब भएको उनले बताए ।
Posted in भिडियो, शिक्षा
Prevनयाँ मोडालिटीमा फेरि थपियो लक डाउन ! केके खुल्छ केके बन्द? पूरा पढ्नुस…
Nextको हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्या गर्ने धम्की दिने ?
कैलालीमा ‘बर्थ डे’ पार्टीमा वि’वाद, नृत्यमा हाँसेर गि’ज्याएको भन्दै किशोरको ह’त्या
सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको तयारी
ओलीको अहिलेसम्मकै बोल्ड निर्णय , सबै नेताको बडीगार्ड फिर्ता